Isikhenkcisi evaporator abavelisi kunye nababoneleli - China Isikhenkcisi umphunga Factory
I-HA490 yimveliso yezinto zePolyolefin. Le modeli inokuchazwa njenge-EAA. Ifilimu eguqukayo enephepha elikhutshiweyo. Ngokwesiqhelo abantu basebenzisa ububanzi be-48cm kunye ne-50cm nge-100 micron efrijini. I-HA490 ilungele ukudibanisa amalaphu kunye nezinto zentsimbi, ngakumbi i ...
I-PO eshushu inyibilika kwifilimu yokuncamathela yefriji evaporator
Iguqulwe polyolefin inyibilika eshushu ifilimu ngaphandle kwephepha elisisiseko. Ngesicelo sabanye abathengi kunye nokwahluka kobugcisa, ifilimu eshushu eshushu ngaphandle kwephepha elikhutshwayo nayo iyimveliso eyamkelekileyo kwintengiso. Le nto ikhankanyiweyo ihlala ipakishwe kwi-200m / roll kwaye izaliswe kwifilimu yebhola kunye nephepha le-tube 7.6cm. ...
I-HD112 yinto eyenziwe nge-polyester. Le modeli inokwenziwa ngephepha okanye ngaphandle kwephepha. Ngokwesiqhelo ihlala isetyenziselwa ukutyabeka ityhubhu yealuminium okanye ipaneli. Senza ububanzi obuqhelekileyo be-1m, obunye ububanzi kufuneka bulungelelaniswe. Zininzi iintlobo zesicelo sokucaciswa. I-HD112 iyasetyenziswa ...
Ezilahlwayo CPE ifaskoti
Le faskoti yeCPE yimveliso esiyifaka kwimarike ngokusekwe kwiimfuno zabathengi abajolise kwiimveliso ezithile. Ngesi sizathu, sakhe iworkshop yethu yemveliso, sathenga oomatshini bokuvelisa, kwaye senza ixabiso elisezantsi, iimveliso ezikumgangatho ophezulu ezigqityiweyo ngexabiso eliphantsi lezinto ezisetyenzisiweyo. CPE yethu APR ...